လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် ဂျပန် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်သည့် မှတ်တမ်းတင် ဗွီဒယိုစာသား မြန်မာပြန် ~ Nge Naing
လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် ဂျပန် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်သည့် မှတ်တမ်းတင် ဗွီဒယိုစာသား မြန်မာပြန်
Saturday, December 04, 2010 Nge Naing 22 comments
ဒီပို့စ်မှာ မှတ်တမ်းတင် ဗွီဒယိုနှင့် လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါဝင်ပြီး ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဗွီဒယိုမှတ်တမ်းက လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်ကာလမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် ဂျပန်မှာ စစ်ပညာသွားသင်ပြီး BIA ကို ဖွဲ့ကာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်တိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်ထံမှ ပထမအကြိမ် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တဲ့ သမိုင်းကို ဂျပန်လူမျိုးတွေက သူတို့ရှုဒေါင့်ကနေ ဖေါ်ပြထားတဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဗွီဒယို ဖြစ်ပြီး အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ အတွေးအမြင် တချို့မှာ လွဲချော်နေတာ ရှိနိုင်ပေမဲ့ ဒီဗွီဒယိုထဲက ပုံတွေဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းက တွေ့ရခဲလှတဲ့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် BIA တပ်တွေ တကယ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဟာ ဂျပန်တပ်နဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံကို လမ်းကြောင်းသုံးခုခွဲပြီး ၀င်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှာ သင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ဒီဗွီဒယိုထဲမှာ BIA တပ်တွေက ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပိုက်နက် နယ်မြေထဲ ခြေချမိတာနဲ့ ရောက်တဲ့ အရပ်တိုင်းမှာ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပပြုလုပ်နေပုံကို ဗွီဒယိုမှာ ဖေါ်ပြထားပြီး စာတန်းထိုးထားတာကို ဖတ်ရတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အဲဒီခေတ်က တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ BIA တပ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့သလိုလို အဲဒီရဲဘော်တွေရဲ့ အသက်ဝိညာဉ်တွေ ကျွန်မကိုယ်မှာ လာရောက်ပူးကပ်နေသလိုလို ခံစားရပြီး ကျွန်မ တကိုယ်လုံးကို ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်း ထစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဗွီဒယိုမှာ စာတန်းထိုးထားတာ သက်သက်ဆိုရင် အမှတ်တမဲ့ ကြည့်သူတွေအနေနဲ့ ဘာလုပ်သွားတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိလိုက်တာ ရှိနိုင်လို့ စာတမ်းထိုးထားတာတွေကို ကျွန်မက ဘာသာပြန်ပြီး ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်တပိုင်းကတော့ ၁၉၄၈ ခု မြန်မာနိုင်ငံ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အချိန်မှာ ကြေညာခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် လွတ်လပ်ရေး အဓိဌါန် ကိုးချက် ကို မြတ်လေးငုံ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဗွီဒယိုကို ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့ပြီး ပြန်လည်ကူးယူ ဖေါ်ပြပါတယ်။
ဗွီဒယို စာတန်းများအား ဘာသာပြန်ဆိုချက်
ဒီနေရာက မြန်မာ့လွတ်လပ်ရး လှုပ်ရှားသူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဂျပန်မှာ ရောက်နေခဲ့စဉ် အောင်ဆန်းရဲ့ အဓိက အမှတ်တရ ဖြစ်စေသော နေရာ ဖြစ်တဲ့ Hamanaka ကန်အနီးက Shizouka Prefucture ဖြစ်ပါတယ်။
တခြားတဘက်မှာတော့ တိုကျိုမှာရှိတဲ့ Suginami Ward's Rennko Ji Shine ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးအတွက် အနှစ် ၅၀ ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရနှင့် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Chandre Bose ကို Rennko Ji Shrine မှာ မြေမြှပ်သဂြိုလ်ခဲ့ရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဆန်းနှင့် Chandra Bose က အာရှတိုက်သား လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အရှေ့အာရှ စစ်ပွဲ (ဒုတိယကမ္ဘာစစ်) ဖြစ်လုဆဲအချိန်အခါ ၁၉၄၂ခု ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို ယုံကြည်သူ မြန်မာလူငယ် အယောက် (၃၀) ဟာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှ ဂျပန်သို့ လျှို့ဝှက်စွာ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းတို့အထဲမှာ အောင်ဆန်းနဲ့ နေ၀င်းကို အသိများပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို အခုချိန်မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
ဂျပန် ထောက်လှန်းရေးတပ်မှ မီနာမီ ကီခန်ခေါ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီးက ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို တက်ကြွစွာ အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ မြန်မာပြည် မှတဆင့် ဆက်သွယ်နေတဲ့ တရုတ်ပြည် လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ရန်နှင့် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရယူပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးကြီး မီနာမီ ဆူဇူကီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လျှို့ဝှက်စွာ ရောက်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှ ရတဲ့အရာအဖြစ် သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တယောက်ရဲ့ အပြော(Ho Barra လို့ရေးထားပါတယ်၊ ဗိုလ်ဗလ ဖြစ်နိုင်တယ် - ငယ်နိုင်) >>> ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး... "ကျွန်တော်တို့ဟာ ၃ နှစ်သင်ရမယ့် သင်တန်းကို ၅ လ ၆ လတည်းနဲ့ အပြတ်သင်ခဲ့ရပါတယ်။ သင်တန်းက တော်တော်ကို ကြမ်းပြီး အင်အင်ကုန်ခန်းခဲ့ပါယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်တွေဟာ သွေးသံတရွဲရွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အားအင်ကုန်ခမ်း နေပါတယ်၊ သင်တန်းသားတွေဟာ မကြာဏ မူးမိုက် သတိလစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒီလောက်အထိ သင်တန်းက ကြမ်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဒါကို လွတ်လပ်ရေးအတွက် ခြေလှမ်းတွေအဖြစ် ရှေ့ရှုခဲ့ပါတယ်”
မန္တလေး နေပြည်တော်ပုံ >>> မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှ အစိုးရက စစ်ကြီး သုံးကြိမ်တိုက်ပြီး ၁၈၀၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှာ သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းယူပြီးတာနဲ့ ဗြိတိသျှတွေက မြန်မာပိုင် ပစ္စည်းမှန်သမျှကို ချက်ချင်း အပိုင်စီးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်သွင်းလာခဲ့ပြီး ဌာနေမြန်မာ လူမျိုးတွေကို အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကရင်ကဲ့သို့ တခြား တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ရာမှာ အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်း တင်းမာမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုထိ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အတော်လေး ဂုဏ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ဆန့်ကျင်ဘက် အနှောင့်အယှက်တွေ ရှိခဲ့တဲ့ ကြားက လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများက လုပ်ရှားမှုတွေကို တနိုင်ငံလုံး အနှံ့ဖြစ်ပွားအောင် ဖေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အောင်ဆန်းနှင့် အမာခံခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဗြိတိသျှ ပရောဂကြောင့် ဂျပန်ကို ထွက်လာစရာအကြောင်း ဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက်တော့ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဆက်လက်ဖေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၂ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ အရှေ့အာရှ စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အောင်ဆန်းနဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဟာ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA) ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အလံတော်မှာ လွတ်လပ်ရေးအမှတ်အသား ဒေါင်းအလံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီးဟာ (BIA) ကို ဆက်လက် ကူညီခဲ့ပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ BIA ဟာ ဂျပန်တပ်မတော်နဲ့အတူ မြန်မာပြည်ကို ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ပြီး မြန်မာပြည် ပိုင်နက်ပေါ် ခြေချမိသည်နှင့် BIA တပ်တွေအားလုံးက အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကို ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် BIA တပ်ဦးရေ တနေ့တခြား တိုးပွားလာပါတယ်။
BIA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း မင်းမွန်က ”ကျွန်တော်တို့တပ်ဟာ လူဦးရေ ၃၀၀ ခန့်တိုးလာတာ တလတောင် မကြောလိုက်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို လူတွေအများကြီး BIA တပ်ထဲ ၀င်လာကြလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်သားတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးကို စောင့်မျှော်နေကြတာ ဖြစ်ပြီး BIA ဟာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို အရယူပေးမယ့် တပ်မတော်ဖြစ်တယ်၊ BIA တပ်မတော်သားတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ယူပေးမယ့် သူရဲကောင်းတွေအဖြစ် နားလည်ထားလို့ လူငယ်တွေ BIA တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
၁၉၄၃ ခု မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ BIA နှင့် ဂျပန်နဲ့အတူ ရန်ကုန်မြို့ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ သူ့ရဲ့ မဟာမိတ်တွေကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မှောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အနှစ် ၈၀ ခန့် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ကျွန်ပြုခံနေရာက လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတွေဟာ ”ဒို့ဗမာ” လို့ အော်ဟစ် ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူထုတွေဟာ BIA နဲ့ ဂျပန်တပ်မတော်ကို ပျူငှာစွာ ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၃ ဇူလိုင်မှာ မြန်မတပ်များအားကို စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အကူအညီပေးခဲ့သော ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီးဟာ နောက်ဆုံးမှာ မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ အောင်ဆန်းနဲ့တကွ သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဟာ နှလုံးသားနဲ့ ရေးသော သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင် စာတစောင်ကို ဆက်သပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးသူ၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်မှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအားလုံး သင့်အား အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်လျက် လွမ်းဆွတ်တသနေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးသွားရင်တောင်မှ သင်နှင့် ဂျပန်စစ်သင်တန်းကျောင်းရဲ့ ကျေးဇူးကို အမြဲတမ်းအောက်မေ့ သတိရနေပါလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင် စာတစောင်ကို ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီးအတွက် အမှတ်တရ ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြီးတော့ ပရိုဖက်ဆာ ဘမော် ဦးဆောင်တဲ့ ဗမာအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အောင်ဆန်းက စစ်ရေး ၀န်ကြီး (War minister) အဖြစ် ဦးဆောင်ပြီး BIA ကို Burmese National Army အဖြစ် အမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်စစ်သားတွေ ပို့ချတဲ့ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၃ ခု သြဂုတ်လ (၁) ရက် နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ လက်အောက်က လွတ်မြောက်တဲ့ ပထမဦးဆုံး အာရှနိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ (ကျွန်မတို့ သမိုင်းမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်ပေးသော ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်-ငယ်နိုင်) ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်တခုကို ရေးဆွဲပြီး ဒေါက်တာဗမော်က နိုင်ငံတော် အဓိပတိ ဖြစ်လာပြီး အောင်ဆန်းက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ဒေါက်တာဗမော်ဟာ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ၀မ်းသာပီတိဖြာတဲ့ မျက်ရည်ကျခဲ့ပါတယ်။ အောင်ဆန်းဟာလည်း ဂျပန်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တခု ဖြစ်တဲ့ အာရှလွတ်လပ်ရေးအတွက် သစ္စာဆိုခဲ့ပါတယ်။ တနေ့တည်းမှာပဲ မြန်မာ အမျိုးသားများစွာက ဂျပန်ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ စစ်သင်တန်းတက်ရန် စစ်တပ်ထဲ ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင် ဖြစ်လာသူ အောင်ဆန်းက သူတို့ကို စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ပို့ပေးပြီး သင်တန်းဆင်း စစ်သားတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ခင်မွန်ထွန်း (Kin Mon Ton) (ဂျပန်စစ်သင်တန်းဆင်း ကျောင်းသား အပတ်စဉ် ၅၈ ပြောကြားချက်)>>> ဂျပန် စစ်သင်တန်းကျောင်းမှာ ဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ အားသာချက်တွေ စိတ်ဝိညာဉ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ အများကြီးသင်ခဲ့တာတွေဟာ အခုထိ ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေပါတယ်...
စိုးမင်း (ဂျပန်စစ်သင်တန်း ကျောင်းဆင်း အမှတ်စဉ် ၅၇ မှ -ပြောကြားချက်) >>> အထက်မိန့်ကို နာခံရမယ်... ပြည်သူလူထုအတွက် ဆိုရင် သေရမှာကို မကြောက်ရဘူး ဒါကို ကျွန်တော်တို့က စစ်ရဲ့ဝိညာဉ် စစ်ရဲ့အသိတရား (Military Spirit) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် တပ်မတော်မှာ လိုက်နာစရာ (၄) မျိုးပဲ ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဂျပန်ခေတ် တပ်မတော်မှာ (၅) မျိုး ရှိပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာ သစ္စာရှိရမယ်၊ regi (နားမလည်ပါ မူရင်းကို ဗွီဒယိုမှာ ကြည့်နိုင်-ငယ်နိုင်) ဖြစ်ရမယ်၊ သတ္တိရှိပြီး ဂုဏ်ပြုခံထိုက်သူ ဖြစ်ရမယ်၊ အောင်ပွဲကို ယုံကြည်ရမယ်၊ ရိုးသား ချိုးခြံချွေတာစွာနဲ့ မထောင်မလွှား နေထိုင်ရမယ်။
ဒီဂျပန်တွေရဲ့ လက်ကိုင်ထားတဲ့ အချက်တွေကို မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ လက်ဆက်ကမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ပြီးနောက်မှာတော့ ဗြိတိသျှနဲ့ အမေရိကန်ကို စစ်ကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (ဗွီဒယိုထဲက စာတန်းထိုးထားတာကို နားလည်သလို ပြန်ဆိုထားပါတယ်။ တချို့ဂျပန်အသုံးအနှုံးတွေကို နားမလည်လို့ မှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ တွေ့ရှိပါက မည်သူမဆို ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်)
ဒီသမိုင်းတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေက လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်စွန့်ကြိုးပမ်း တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းတွေ ဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ မေ့လို့ရခဲ့မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ကလေးတွေဆိုရင်လည်း အံစာပစ်သွားကစားဖို့ လူကြီးတွေဆိုရင်လည်း ကြက်ဝိုင်း၊ ဖဲဝိုင်း နီထောင်ဝိုင်း သွားလောင်းဖို့ပဲ စဉ်းစားနေကြတယ်။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က တခြားနေ့တွေမှာ လောင်းကစားဝိုင်းတွေ ကျင်းပခွင့်မပေးတဲ့အချိန်မှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျင်းပခွင့်ပေးတာ မှတ်မိနေပါတယ်။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တကယ်တော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို ကျင်းပဖို့ သက်သက် မဟုတ်၊ လွတ်လပ်စွာ လောင်းကစားပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ မဟုတ်ပါ။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သူ့ကျွန်ဘ၀ ရောက်ခဲ့တာကို ဘိုဘွားဘီဘင်တွေ ဘယ်လို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်၊ အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ဖို့ ဂျပန်အကူအညီယူပြီး ဂျပန်တွေကလည်း တိုင်းပြည်ထဲရောက်လာပြီး ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးကိုသာ အယောင်ပြပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် အမျိုးမျိုး ရက်စက် ယုတ်မာလာတဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်အကူအညီကိုယူပြီး တခါ ဂျပန်ကို ပြန်တိုက်ထုတ်ရပုံ စတဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရယူထားတဲ့ လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရကို ပြန်လည် သတိရဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ နအဖလက်ထက်မှာတော့ အစဉ်အလာ ကြီးမားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ဟာလည်း ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ် ဂုတ်သွေးစုပ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် ညှင်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကလည်း အင်္ဂလိပ်နှင့် ဂျပန်နှစ်ခုစလုံးက ဆရာပြန်တင်ရလောက်အောင် ဆိုရွားနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး အနေနဲ့ ရရှိထားတဲ့လတ်လပ်ရေး အနှစ်သာရကို ပြန်လည် အဖတ်ဆည်ဖို့ အင်မတန်မှ လိုအပ်နေပါတယ်။ အမိမြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးသူအားလုံး လွတ်လပ်ရေး အနှစ်သာရကို ပြန်လည် အဖတ်ဆည်နိုင်ကြပါစေ။ - Nge Naing)
Posted in: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း,မှတ်တမ်း,မျှဝေခြင်း,သမိုင်းဝင်နေ့များ
January 4, 2010 at 1:13 PM Reply
နောက်လာနောက်သားတွေသိအောင် ခုလိုအပြည့်အစုံ တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ တူမ မငယ်ရေ
January 4, 2010 at 3:19 PM Reply
ဗီဒီယိုဖိုင် မကြည့်ခင် စာအရင် ဖတ်လိုက်တာ
January 4, 2010 at 3:40 PM Reply
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကိုပါ ဆက်ကြည့်မိ တော့ မျက်ရည်ဝဲမိတယ် အမရေ ။
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ နိင်ငံအနာဂါတ်ပါ ကျဆုံးသွား သလိုပါပဲဗျာ
January 4, 2010 at 6:07 PM Reply
အမရေ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဒါလေးတွေ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးပါ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီး ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိအောင် ခံစားရပါတယ်
January 4, 2010 at 7:06 PM Reply
မငယ်ရေ...ကိုယ် မသိ မမှီလိုက်တာလေးတွေ သိရ၊ ကြည့်ရတာ သိတ်ကောင်းတယ်၊ မှတ်သားစရာတွေ အများကြီးပါပဲ၊ တိုင်းပြည်အပေါ် ချစ်တဲ့သူတွေကို ကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာဝမ်းနည်းရတယ်၊ ဘုန်းကြီးလို့သက်မရှည်တာပေါ့လေ...။
အသက်ရှည်နေတဲ့ဟာကြီးတွေကျပြန်တော့ ဘုန်းမကြီးတဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေ....
January 4, 2010 at 8:21 PM Reply
မငယ်နိုင်ရေ ... ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ စောစောထဲကကြည့်ပြီးတာပါ။ အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့ ခုမှ ရေးလိုက်ရတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းထဲကအတိုင်း တကယ်ကျင့်ကြံကြသော် ကောင်းလေစွ လို့ပဲ စိတ်ထဲ ဖြစ်နေမိတယ်။
January 5, 2010 at 12:56 AM Reply
စာတွေရော မှတ်တမ်းတွေပါ ဖတ်ရူသွားပါတယ်
January 5, 2010 at 1:46 AM Reply
ရီအိဂိ - Reigi - Etiquette - လောကဝတဿတရား လိုက်နာရမယ် လို့ ဘာသာပြန်မလားမသိ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။
စာလာဖတ်သွားသူ အားလုံးရဲ့ feedback အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေက ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်က ပြန်ကူးပြီး ဘလော့ဂ်ထဲမှာ စုစုစည်းစည်း ဖြစ်အောင် သိမ်းထားရင်း ဗွီဒယိုကို ပိုပြီးလေးနက်သွားအောင် ဘာသာ ပြန်လိုက်တာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာလာဖတ်သူတွေမှာ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် ကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိ (သို့) မှတ်သားစရာ တခုခု ကျန်နေခဲ့ရင် ဒီပို့စ်ကို တင်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဒီပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို တခြားသူတွေနည်းတူ မျှဝေယူသမား တယောက်သာ ဖြစ်လို့ ဒီအချက်အလက်တွေကို မူလရှာဖွေစုဆောင်း တင်ပေးတဲ့ ကိုနစ်နေမန်းကိုပဲ ကျွန်မတို့ ကျေးဇူးတင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ Reigi ရဲ့ Definition ကို တကူးတက ရှာပေးတဲ့ Talki ကို ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
January 5, 2010 at 2:18 PM Reply
Reigi ဆိုတာကတော့ ဂါရဝတရားရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Rennko Ji ဂျပန်ဘုရားကျောင်းပါ... ကျွန်တော်အရင်နေခဲ့တဲ့ နေရာနားမှာပါ... အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးChandre Boseရဲ့ ရုပ်တုရှိပါတယ် ...အခုလို နှစ်သစ်ဆိုရင် ဆုတောင်းသူတွေ အပြည့်ပါ... အခုလိုဘာသာပြန်ပြီး ပြန်တင်ပေးထားတာ အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်...
January 5, 2010 at 5:58 PM Reply
မငယ် ဗီဒီယို ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ်တွေ တိုင်းပြည်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ် အခန်း မှိန်အောင် ပြောက်အောင် လူမသိအောင် ဖုံးဖိ ထားကြတယ်။
သူများတွေကတော့ ရိုသေရကောင်းမှန်း လေးစားစရာ ကောင်းမှန်း သိကြတယ်။
ငွေပို့တာ ပွဲစားရှိတဲ့ နိုင်ငံကို ပို့ရ တာပါ။ သူကမှ တဆင့် ငွေရတဲ့နေ့ ပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်ပြီး ဗမာငွေ ချေတာပါ မငယ်နိုင်ရေ။ ပို့ပေးတဲ့သူရှိတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရတယ်။
January 6, 2010 at 12:08 AM Reply
အမရေ အခုလို အခါသမယ မှာ အထူးတလည် လေးနက်မှု ရှိတဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင် မဆုံးပါဗျာ .... တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်
January 6, 2010 at 5:56 AM Reply
ဖတ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရေ... အဖိုးတန်တဲ့ ပို့စ် တခုပါ
January 6, 2010 at 4:47 PM Reply
မန့်ခဲ့ပါတယ်... ဖတ်ရတာ တန်ဖိုးရှိလိုက်တာ အစ်မ...
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးများစွာ
January 7, 2010 at 7:07 PM Reply
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
January 12, 2010 at 3:27 AM Reply
ဗီဒီယိုနဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။
January 18, 2010 at 6:38 AM Reply
ဒီ Youtube video ကျွန်တော်ရဲ့ facebook မှာ လင့်ခ်လုပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။
January 18, 2010 at 8:30 PM Reply
Ionetone ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်ဖေါ်ပြလို့ရပါတယ်။
January 6, 2011 at 4:41 PM Reply
အမရေ ဗီဒီယိုလေးက ကျွန်တော်ဆီမှာ ကြည့်လို့မရဘူးဗျ။ စာတွေပဲ ဖတ်သွားပါတယ်။
တကယ်ကို့ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ သမိုင်းအစအနတွေပါပဲဗျာ။
January 6, 2011 at 7:15 PM Reply
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါ ကွန်ပြူတာနဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ဗွီဒီယိုကို နှိပ်လိုက်ရင် "This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been closed.
Sorry about that." လို့ ပေါ်လာတဲ့ စာသားအရ သူ့မူရင်း Youtube account ကို ပိတ်လိုက်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဗွီဒီယိုလေးက ဂျပန်က ရိုက်ထားတဲ့ တကယ့်မှတ်တမ်းတွေ ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် ပိတ်လိုက်လဲ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကံအားလျှော်စွာ ဒီဗွီဒီယိုကို ကြည့်ရတုန်းက စာတန်းထိုးထားတဲ့ စာသားကို ကူးထုတ်ပြီး ဘာသာပြန်ထားရင် ကောင်းမယ်လို့ အကြံအစည် ရခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွန်မ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲ ၀မ်းသာနေရတယ်။